Mon, Jul 13, 2020 at 11:11am
आईतवार, ११ जेष्ठ २०७७,	आहाखबर	1.1K
काठमाडौं। गर्मी बढेसँगै लामखुट्टेको बिगबिगी पनि बढ्छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट डेंगु रोग सर्छ। डेंगु रोग एक लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने सरुवा रोग हो। यो गर्मी र वर्षायाममा हुने गर्छ। पानी भन्डारण गर्ने स्थल र पानी जम्मा हुने कुनै पनि स्थान र ढलको राम्रो व्यवस्था नभएको जमिनमा लामखुट्टेले प्रजनन् गर्दछन्। डेंगु पोथी लामखुट्टेबाट सर्छ।
तर, अहिले कोरोना भाइरस विश्वभर फैलिएको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट कोरोना सर्छ कि सर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लामखुट्टेको टोकाइबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण नहुने जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले लामखुट्टेको टोकाइबाट कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको अहिलेसम्म प्रमाणित नभएको बताए।
'लामखुट्टेको टोकाइबाट आजसम्म कोरोना संक्रमण भएको जानकारी छैन। प्रमाण छैन। त्यसैले कोरोना भाइरस लामखुट्टेले सार्न सक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित नभएको कुरा हो,’ उनले भनेका छन्, 'नयाँ भाइरस स्वासप्रश्वाससम्बन्धी जीवाणु भएकाले आफूलाई जोगाउन बारम्बार हात धुने, मास्कको प्रयोग गर्ने र खोक्दा कुहिनाको प्रयोग गर्नुपर्छ।'
अहिलेसम्म लामखुट्टेको टोकाइबाट कोरोना सरेको भेटिएको छैन। डब्लूएचओका अनुसार पनि हालसम्म कोरोना भाइरस लामखुट्टेको टोकाइबाट सरेको पुष्टि भएको छैन। यो संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाछ्यूँ गर्दा नाक वा मुखबाट निस्कने छिटाको माध्यमबाट र श्वासप्रश्वासबाट मात्र सर्छ। तर, कोरोना र डेंगुका केही लक्षण भने मिल्छन्। कोरोना भाइसका कारण उच्च ज्वरो, छिटोछिटो श्वास फेर्ने हुन्छ। यो लक्षण डेंगु रोगमा पनि देखिन्छ।
प्रवक्ता देवकोटाले लामखुट्टेको टोकाइबाट मलेरिया र डेंगुजस्ता रोग सर्न सक्ने बताए। यो समय गर्मीको समय भएकाले थप सतर्कता अपनाउ पर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, 'लाखुट्टेको टोकाइबाट बच्न घर वरपर सफा राख्ने, झुलको प्रयोग गर्ने र झ्याल तथा ढोकामा जालीको प्रयोग गर्नुपर्छ।'
प्रवक्ता डा. देवकोटाले आयुर्वेदिक औषधीहरुबाट कोरोना भाइरसको उपचार हुन्छ भन्ने कुरामा सत्यता नभएको बताए। यद्यपि आयुर्वेदिक औषधीहरुले मानिसको शरीरमा रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउन मद्धत गर्ने उनको भनाई रहेको छ।